ရွံတတ်၊ အန်တတ်ပေမယ့် Clean up Challange မှာ ထိပ်ဆုံကပါဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ မုဏ်း - Cele GabarCele Gabar
ဆယ်လီကမ္ဘာပရိသတ်ကြီးရေ မော်ဒယ်သရုပ်ဆောင် မင်းသမီးချောလေး မုဏ်းကို သိကြပြီးဖြစ်ကြမှာပါနော် ။မုဏ်းကတော့ MRTV4ဇာတ်လမ်းတွေကနေ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ရင်း ပရိသတ် အသိမှတ်ပြုလက်ခံလာတဲ့ မင်းသမီးချောလေးဖြစ်ပါတယ်။သူမကတော့နောက်ပိုင်းမှာ ကြော်ငြာများ ဗီဒီယိုဇာတ်ကားများစွာ ရိုက်ကူးလာရကာ ပရိသတ် အခိုင်အမာရရှိပြီး အောင်မြင်ကျော်ကြားလာသူတစ်ယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။မုဏ်းတစ်ယောက် အင်မတန် ရွံရွာတတ်သူဖြစ်ပေမယ့် အများအကျိုးအတွက် Clean up Challange မှာ ပါဝင်ခဲ့တယ် လို့ သိရပါတယ်.
အဆိုပါအကြောင်းအရာ ကို ကိုအရည်ကြို ရဲ့ လူမှုကွန်ရက် စာမျက်နှာကနေဖော်ပြထားတာပါ ။ ကို အရည် ကြို က “#ကျေးဇူးပါမင်းသမီးမုဏ်း CleanUpChallenge မှာ ပါမယ်နော်ဆိုပီး ပထမဆုံး ဖုန်းလှမ်းဆက်သူ ရိုးရိုးသာ မာန်နံရင်တောင် ရွံတက်ပီး၊ အန်တက်သူကအနံတွေထောင်းထောင်းထနေတာကို တစ်ချက်မျက်နှာမပျက်ဘဲ အမှိုက်တောင်းတွေသယ်ပို့ပီး လာရောက်ကူညီပေးသွားတဲ့ MRTV မင်းသမီး မုဏ်းကို ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါကြောင်း ဖော်ပြအပ်ပါသည်
ချစ်ခြင်းများစွာဖြင့် အရည်ကြို” လို့ ရေးသားဖော်ပြထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ ဆယ်လီကမ္ဘာပရိသတ်ကြီးရေ အများအကျိုးအတွက် စွမ်းစွမ်းတမံရှေ့ဆုံးက ပါဝင်ခဲ့တဲ့ မုဏ်းအတွက် မှတ်ချက်ကနေတစ်ခုခုပြောပြခဲ့ကြပါနော်။
Source – Cele Gabar
ရှံတတျ၊ အနျတတျပမေယျ့ Clean up Challange မှာ ထိပျဆုံကပါဝငျဆောငျရှကျခဲ့တဲ့ မုဏျး
ဆယျလီကမ်ဘာပရိသတျကွီးရေ မျောဒယျသရုပျဆောငျ မငျးသမီးခြောလေး မုဏျးကို သိကွပွီးဖွဈကွမှာပါနျော ။မုဏျးကတော့ MRTV4ဇာတျလမျးတှကေနေ ပါဝငျသရုပျဆောငျရငျး ပရိသတျ အသိမှတျပွုလကျခံလာတဲ့ မငျးသမီးခြောလေးဖွဈပါတယျ။သူမကတော့နောကျပိုငျးမှာ ကွျောငွာမြား ဗီဒီယိုဇာတျကားမြားစှာ ရိုကျကူးလာရကာ ပရိသတျ အခိုငျအမာရရှိပွီး အောငျမွငျကြျောကွားလာသူတဈယောကျလညျးဖွဈပါတယျ။မုဏျးတဈယောကျ အငျမတနျ ရှံရှာတတျသူဖွဈပမေယျ့ အမြားအကြိုးအတှကျ Clean up Challange မှာ ပါဝငျခဲ့တယျ လို့ သိရပါတယျ.
အဆိုပါအကွောငျးအရာ ကို ကိုအရညျကွို ရဲ့ လူမှုကှနျရကျ စာမကျြနှာကနဖေျောပွထားတာပါ ။ ကို အရညျ ကွို က “#ကြေးဇူးပါမငျးသမီးမုဏျး CleanUpChallenge မှာ ပါမယျနျောဆိုပီး ပထမဆုံး ဖုနျးလှမျးဆကျသူ ရိုးရိုးသာ မာနျနံရငျတောငျ ရှံတကျပီး၊ အနျတကျသူကအနံတှထေောငျးထောငျးထနတောကို တဈခကျြမကျြနှာမပကျြဘဲ အမှိုကျတောငျးတှသေယျပို့ပီး လာရောကျကူညီပေးသှားတဲ့ MRTV မငျးသမီး မုဏျးကို ကြေးဇူးအထူးတငျရှိပါကွောငျး ဖျောပွအပျပါသညျ
ခဈြခွငျးမြားစှာဖွငျ့ အရညျကွို” လို့ ရေးသားဖျောပွထားတာကိုတှရေ့ပါတယျ။ ဆယျလီကမ်ဘာပရိသတျကွီးရေ အမြားအကြိုးအတှကျ စှမျးစှမျးတမံရှဆေုံ့းက ပါဝငျခဲ့တဲ့ မုဏျးအတှကျ မှတျခကျြကနတေဈခုခုပွောပွခဲ့ကွပါနျော။
Previous Previous post: အကယ်ဒမီပေးပွဲရှိနေတာတောင် Clean up Challenge မှာပါဝင်ခဲ့တဲ့ အေးမြတ်သူ
Next Next post: ဒါရိုက်တာဆု နဲ့ ဇာတ်ဆောင်ဆုနှစ်ဆုကို သိမ်းပိုက်မဲ့ ခီမောင်နှံတို့ရဲ့ ပွဲတက်ပုံရိပ်လေးများ
၂၀၁၈ ခုနှစ်အတွက် အကောင်းဆုံးအမျိုးသားဇာတ်ပို့ဆုကို အပြိုင်လုရမယ့် မင်းသား(၄)ဦး
Published: December 27, 20182:03 pm
လည်ချောင်းထဲကို ပိုက်တွေထည့်ကာ ခွဲစိတ်မှုပြုလုပ်ခဲ့ရတာကြောင့် အသံတွေပျက်စီးသွားခဲ့ရတယ် ဆိုတဲ့ အဆိုတော် ဆိုတေး
Published: March 13, 201912:35 pm
ဂေါ်မစွံ ကြသေးတဲ့ ကိုတင်ဖေ နဲ့ မြိုင်တို့ရဲ့ ချစ်သူများနေ့ဖြတ်သန်းမှုများ
Published: February 15, 20196:06 pm
ပရိသတ်တွေအတွက် ဒါန အောင်ပွဲတစ်ခုကို ပြန်လည်မျှဝေလိုက်တဲ့ လူမင်း
Published: January 28, 20195:31 pm
လူမှုရေးအရှုပ်အရှင်းများကြောင့် Terror Bass အဖွဲ့ကိုခေတ္တရပ်နားမည်
Published: February 20, 20191:38 pm
ညဘက်ဒီအချိန်ထိအိမ်မှာမရှိရအောင် ဘာအလုပ်လုပ်စားတာလဲ လို့အမေးခံခဲ့ရတဲ့ ပိုင်ဖြိုးသု
Published: March 13, 201912:56 pm
ဇာတ်ပို့သရုပ်ဆောင် ကြာဥအဖြစ်နဲ့ အကယ်ဒမီရဖို့ တစ်ပြေးနေတဲ့ မအေးသောင်း
Published: March 23, 20192:11 pm
Published: February 22, 20179:54 am Updated: March 18, 20199:38 am
tik tok တောင်မဆော့တတ်တဲ့ ရိုးသားလွန်းတဲ့ ဖြိုးမြတ်အောင်
Published: December 15, 20183:55 pm Updated: 3:56 pm